သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘာသာပြန်ခြင်းကိုဘယ်လိုပို့ရမလဲ Martech Zone
အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးသည်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကူးစက်ရောဂါနှင့်အတူလူအများအပြားသည်ယခင်ကထက်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်နေကြသည်။ အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးသည်ကွန်ပျူတာနောက်ကွယ်မှကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူ ဦး ရေစာရင်းကိုရောက်ရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးကြီးပုံကိုလေ့လာကြမည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘာသာပြန်ချက် သင်၏ eCommerce ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်၎င်းတို့အားမည်သို့အသုံးပြုရမည်။
သင်၏အီးကောမတ်စ်လုပ်ငန်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရနိုင်သည်။ Tomedes ၏ဘာသာစကား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ CEO Ofer Tirosh ကပေးသည် အကြံ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးသင့်ရဲ့တည်ဆောက်မှုအကြောင်းပါ နိုင်ငံတကာစျေးကွက်မဟာဗျူဟာ တိုးချဲ့နိုင်ရန်အတွက်:
အကယ်၍ သင်ကထိုနိုင်ငံ၏ဘာသာစကားကိုမပြောတတ်လျှင်၊ သင့်တော်တဲ့အေဂျင်စီတစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးမြန်မြန်လုပ်ပါ။ သင်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကျိုးတူအေဂျင်စီအားအစကတည်းကပါဝင်ခြင်းသည်သင်၏အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းအတွက်သိသိသာသာခြားနားသွားစေနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုသုတေသနပြုသည်ဖြစ်စေ၊ သင်ပစ်မှတ်ထားသောစျေးကွက်တွင်ပိုမိုနှစ်သက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်များအကြောင်းကိုရှာဖွေသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ပြသည်ဖြစ်စေ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသတင်းအချက်အလက်မှဝက်ဘ်ဆိုက်ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများအထိအရာအားလုံးကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောဘာသာပြန်သူသည်သင့်အတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည် နိုင်ငံတကာစျေးကွက်မဟာဗျူဟာ.
Ofer Tirosh, Tomedes ၏စီအီးအို
အီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုသည်ယခုနှစ်တွင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးလူအများစုကစတိုးဆိုင်များကိုပိတ်ထားစဉ်သို့မဟုတ်လူမှုရေးဝေးကွာသောနေရာကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးနေစဉ်အွန်လိုင်းမှ ၀ ယ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းခံရသည်။ ဥပမာ၊ ၂၀၂၀၊၂၀၂၀ တွင်အမေရိကန်ရှိ eCommerce ရောင်းချမှုသည် ခုန်တက် ၁၆.၁% သို့တိုးတက်လာပြီး Q16.1 ရှိ ၁၁.၈% မှတိုးလာသည်။
မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန်ဆက်လက်လေ့လာပါ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘာသာပြန်ချက် သင်၏အီးကောမတ်စ်လုပ်ငန်းကိုတိုးတက်ရန်ကူညီရန်။
Marketing ဘာသာပြန်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏အီလက်ထရွန်းနစ်ရောင်းဝယ်မှုဆိုဒ်ကိုမည်သို့စျေးကွက်တင်မည်နည်း
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး သင်၏ eCommerce ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာလုံးများကိုမှန်ကန်စွာထုတ်ယူနိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည့်ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမျိုးအစားများစွာပါ ၀ င်သည်။ မှတဆင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘာသာပြန်ချက်အောက်ပါဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများသည်သင်၏လူများကိုသင်၏အီးကောမတ်စ်ဆိုက်သို့ရောက်အောင်သင်သေချာစေနိုင်သည်။ ဘာသာပြန်ချက်ဥပမာအချို့ကဘာတွေလဲ။ အထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေအနေတွင်၎င်းတို့ပါဝင်သည် -
ပြသခြင်းကြော်ငြာများနှင့်လူမှုမီဒီယာကြော်ငြာများအပါအ ၀ င်ဒီဂျစ်တယ်ကြော်ငြာများ
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး သင်၏ကုမ္ပဏီကသင်ထင်မြင်ယူဆသောအရာဖြစ်လျှင်ရိုးရာကြော်ငြာအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများဘာသာပြန်ရာတွင်လည်းကူညီနိုင်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုအာရုံစိုက်ပါ အားထုတ်မှု။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ရိုးရာပုံနှိပ်ခြင်းကြော်ငြာများ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ အရောင်းစာရေးများ၊ လက်ကမ်းကြော်ငြာများ၊ ကတ်တလောက်နှင့်အခြားအရာများကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်သင်၏လမ်းကြောင်းကိုနောက်တစ်နည်းဖြစ်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘာသာပြန်ချက် eCommerce စန်းသို့ဖြုန်းနေကြတယ်။ ၄ င်းသည်တိကျသောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုက်ရိုက်မမြှင့်တင်နိုင်ပါ။ ယင်းအစား၎င်းသည်သင့်လျော်သောလူ ဦး ရေအတွက်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေမှုရှိသောအကြောင်းအရာကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထောက်ပံ့ရေး eCommerce စတိုးသည်ခွေးကလေးအသစ်ကိုလေ့ကျင့်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများအကြောင်းဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုထုတ်နိုင်သည်။
ပါဝင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်လူများအားပါ ၀ င်စေပြီးအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များအား၎င်းတို့ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမည့်နည်းဖြင့်ပြောဆိုစေသည်။ ရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်လူများကို ၀ ယ်ရန်တောင်းဆိုသည်၊ ၎င်းသည်ယနေ့အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအတွက်အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဆို၏ခိုင်မာသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် နိုင်ငံတကာစျေးကွက်မဟာဗျူဟာ.
အကယ်၍ သင်သည်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူသွားရန်ရွေးချယ်ပါကဘာသာပြန် ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်၏အထောက်အကူနှင့်ဖျော်ဖြေမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာသည်၎င်း၏အဓိကသတင်းစကားများနှင့်ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအသစ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သေချာစေနိုင်သည်
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး သင်၏အီးကောမတ်ဆိုဒ်နှင့်လည်းကူညီနိုင်သည်။ သင်၏ဆိုဒ်ကိုဘာသာပြန်ပြီးသေချာစွာစစ်ဆေးပါ နှင့်ဒေသခံတစ် ဦး ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာ။ ယေဘုယျဘာသာပြန်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ဘာသာပြန်သည်စာသားသည်ဘာသာစကားအသစ်ဖြင့်ကောင်းစွာဖတ်နိုင်အောင်သေချာစေသည်။ သို့သော်ဒေသခံများသည်ဒေသတစ်ခုအတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည် eCommerce အတွေ့အကြုံ။ ဒေသတွင်းလုပ်နိုင်သည် -
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဥပဒေများ (သို့) cookie သတိပေးချက်များကဲ့သို့သောဒေသဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီရန် eCommerce ဆိုဒ်ကိုကူညီပါ
A ကောင်းဆုံး စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘာသာပြန်ချက် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဘာသာပြန်ခြင်း၊ ဒါကိုပြသနိုင်ပါတယ် ကူးယူခြင်းနှင့်ဘာသာပြန်ချက်လွယ်ကူသောဖန်ဆင်းတော်မူ၏ ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာအတွက်နှင့်မိတ္တူအားလုံးသည်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်သေချာစေသည်။
ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြည့်သည့် eCommerce ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဘာသာပြန်ခြင်းညံ့ဖျင်းခြင်းသို့မဟုတ်ငွေကြေးသင်္ကေတများရှိနေဆဲဖြစ်သော eCommerce ဆိုဒ်ကိုနိုင်ငံခြားပုံစံဖြင့်ရှာဖွေလေ့ရှိသည်။ ထိုသေးငယ်သောဒြပ်စင်များသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုခက်ခဲစေပြီးသင်လိမ်လည်မှုဆိုက်တစ်ခုကိုထိမိပြီလားသင်တွေးမိစေသည်။ သေချာအောင်လုပ်ပါ eCommerce ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နေရာချထားခြင်းနှင့်သင်၏ဖောက်သည်များအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေသန္တရသည်အကောင်းဆုံး၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများ.
တတ်နိုင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း
ကျွန်ုပ်နှင့်အနီးအနားရှိဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘာသာပြန်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများဖြစ်သောဗြိတိန်နှင့်လန်ဒန်ဘာသာပြန်အေဂျင်စီများကို အသုံးပြု၍ ဒေသဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်ရနိုင်သည်။ စည်းကမ်းချက်များကို သုံး၍ သင်လိုအပ်သည့်ဘာသာစကားဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနိုင်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘာသာပြန်ချက် စပိန်ဘာသာ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘာသာပြန်ချက် တရုတ်ဘာသာဖြင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘာသာပြန်ချက် ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်
၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုစီအတွက်မေးခွန်းများကိုစာရင်းပြုစုရန်သေချာစေပါ။ ထိုမေးခွန်းများကိုသင်၏အဆက်အသွယ်ကမည်သို့ဖြေကြားပေးသည်ကိုသူတို့ကမည်မျှတတ်ကျွမ်းသည်၊ မည်မျှထိတွေ့ဆက်ဆံရကြောင်းသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။ စျေးနှုန်းများ၊ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကိုဆက်လက်ထားရှိရန်၎င်းတို့မည်သို့ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း၊ ဘာသာပြန်သူများ၏အထောက်အထားများနှင့်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘာသာပြန်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးဘာသာပြန်ဆိုမှုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးနိုင်ငံတကာအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးinternationalization ရစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘာသာပြန်ချက်ဘာသာပေါင်းစုံနတ်သမီးကူးယူကူးယူဘာသာပြန်ချက်ဘာသာပြန်ချက်ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများ
သင်၏ C-Suite ဖြင့်ဝယ်သူဝယ်ယူသူ၏ဒေတာပလက်ဖောင်း (CDP) ကိုဝယ်ယူရန်ခြေလှမ်းများ